10 Qalab Qormo oo Cajiib ah oo loogu talagalay Suuqgeynta cajiibka ah | Martech Zone
Arbacada, Maarso 13, 2019 Axad, Maarso 7, 2021 Joe McLean
Way adagtahay in la helo ereyo sax ah oo lagu sifeeyo awooda iyo meelkastaba ha ahaato qorista nuxurka. Qof kastaa wuxuu ubaahan yahay waxyaabo tayo leh maalmahan - laga bilaabo qorayaasha hiwaayadda u leh shirkadaha waaweyn ee caalamiga ah ee isku dayaya inay horumariyaan wax soo saarkooda iyo adeegyadooda.
Sida lagu sheegay warbixinta, shirkadaha wax ku qora bogagga internetka ayaa hela 97% xiriiriyeyaal badan websaydhyada ay dhigtaan kuwa dhiggooda ah ee aan wax ku qorin. Daraasad kale waxay muujineysaa inaad ka dhigto baloog ahaan qayb muhiim ah oo ka mid ah websaydhkaaga ayaa ku siin doonta 434% fursad wanaagsan oo aad ku noqon karto kaalinta sare on matoorada raadinta.
Laakiin si aad u noqoto qoraa guuleysta, waxaad u baahan tahay inaad ka faa'iideysato xaaladda barnaamijyada farshaxanka iyo fiilooyinka. Caawiyeyaasha dijitaalka ah ayaa kaa caawin kara inaad hagaajiso qoristaada, markaa akhriska sii wad si aad u hubiso 10 aaladaha cajiibka ah ee qorista waxyaabaha loogu talagalay suuqgeynta cajiibka ah.
1. Blog Generator Mawduuc
Helitaanka fikrad nuxur cusub ah ma sahlana haddii aad ku daabacdo qoraal toddobaad kasta ama xitaa maalin kasta. Taasi waa sababta Hubspot horumariyo Mawduuc Mawduuc Blog ah si looga caawiyo qorayaasha helitaanka mawduuca ugu habboon ee goobahooda. Nidaamku waa mid aad u fudud: gali ereyga muhiimka ah qalabkuna wuxuu ku tusayaa dhowr fikradood.
Tusaale ahaan, waanu galnay marketing waxaana helay talooyinka soo socda:
Suuqgeyn: Filashooyinka iyo Xaqiiqda
Suuqgeynta weligeed ma xukumi doontaa adduunka?
Waxa xiga ee weyn ee suuqgeynta
Suuqgeynta ayaa lagu sharaxay wax kayar 140 xaraf
Hubspot Blog Generator Mawduuc FATJOE Blog Generator Mawduuc
2. Qalabka ereyga furaha
Haddii aad rabto inaad aragto sida wax u shaqeeyaan meel ka baxsan Qorshaha Keyword ee Google, waxaan kugula talineynaa inaad tijaabiso Qalabkan Keyword. Barxadku wuxuu awood u leeyahay inuu soo saaro in ka badan 700 talooyin keyword keyword erey kasta oo raadinta ah.
Qalabkani xitaa kuma weydiinaayo inaad sameysato koonto gaar ah, sidaa darteed waad u isticmaali kartaa gebi ahaanba bilaash inta jeer ee aad u baahato. Waxa aad ka filan karto Keyword Tool waa inaad si dhakhso leh u aqoonsato raadinta Google ee ugu caansan oo aad ka hesho ereyo muhiim ah oo si fiican ugu habboon baahiyaha bartilmaameedkaaga.
Halkan waxaa imanaya mid ka mid ah shaqsiyaadka aan ugu jecel nahay, Coffitivity. Mashruucan waxaa loogu talagalay dhammaantiin inaad maskax furan oo bilaash ah oo ku raaxeysta ka shaqeynta xafiiska laakiin aan awoodin. Coffitivity wuxuu dib u abuuraa dhawaaqyada jawiga makhaayada si kor loogu qaado hal-abuurkaaga oo kaa caawiyo inaad si fiican u shaqeyso.
Waxay bixisaa codad badan oo jawiga ku habboon, laga bilaabo subaxa subaxa iyo Café de Paris ilaa qolalka qadada iyo Bistros-ka Brazil. Isku-kalsoonidu waxay ku siinaysaa dareen ah inaad ku shaqeyso jawi deggan oo qabow, taas oo dhiirrigelin dhab ah u ah qorayaasha badan.
4. Diirada saar
Dib u dhigistu waa dilaa wax soo saarka, laakiin waxaa jira siyaabo lagula tacaalo dhibaatadan, sidoo kale. Focus Focusd waxay kordhineysaa wax soo saarkaaga adoo xaddidaya waqtiga aad ku qaadan karto bogagga internetka ee waqtiga kaa luminaya. Sidee u shaqaysaa?
Qalabka wax lagu qoro wuxuu cabiraa waqtiga aad ku bixiso internetka wuxuuna xiraa dhammaan astaamaha sida ugu dhakhsaha badan markii loo qoondeeyay. Waxay ku qasbeysaa dib-u-dejiyayaashu inay xoogga saaraan shaqooyinkooda waxayna ka caawiyaan inay gutaan howlaha iyo ujeedooyinka maalinlaha ah. Waxaan si guud ugu mahadcelineynaa asxaabteena kale Qorista Qormada inaad nagu soo bandhigto qalabkan cajiibka ah!
5. Ereyada 750
Ku dhowaad 500 kun oo qoraa adduunka oo dhan waxay adeegsadaan 750 Erey oo ah kaaliye qoraal ah oo qiimo leh. Qalabkan waxaa lagu sameeyay hal ujeedo oo keliya - si looga caawiyo dadka wax qora ee wax qora inay caado ka dhigtaan inay wax qoraan maalin kasta. Sida magaceedaba ka muuqata, degelku wuxuu ku dhiirrigelinayaa hal-abuurayaasha inay qoraan ugu yaraan 750 erey (ama saddex bog) maalin kasta. Macno malahan waxaad ka qorayso inta aad si joogto ah u sameyneyso. Hadafku waa cad yahay: qorista maalinlaha ah si toos ah ayey kuugu imaan doontaa adiga xoogaa kadib.
6. Ku Deg Deg Qormadayda
Qorista qoraalada baloogyada way adagtahay, laakiin qorida maqaalada tacliinta sare waa xitaa dhib badan. Tani waa sababta ay qorayaasha qaar u adeegsadaan Rushmyessay, oo ah hay'ad u shaqaysa daraasiin qorayaal khibrad u leh dhammaan dhinacyada khibradda.
Craig Fowler, oo ah madaxa hore ee Kordhinta Xirfadaha UK, ayaa sheegay in Rushmyessay ay inta badan shaqaaleyso shaqsiyaadka leh shahaadooyinka Master ama PhD kuwaas oo damaanad qaadaya bixinta degdega ah iyo tayada heerka ugu sareysa. Waxa xitaa ka sii cajiibsan ayaa ah in Rushmyessay ay u fidiso macaamiisha 24/7 taageero macaamiil ah, sidaa darteed waxaad u diri kartaa fariin ama u siin kartaa wicitaan markasta oo aad rabto.
Rush My Qormo
7. Daanyeer sahan
Fariimaha ugufiican waa kuwo xiiso iyo xiiso leh, sidaa darteed waxay ku dhiirrigeliyaan isticmaaleyaasha inay tallaabo qaadaan iyagoo weydiinaya su'aalo ama faallooyin uga tagaya. Haddii aad rabto inaad maqaallada ka dhigto mid is-dhexgal badan, waa inaad isticmaashaa Daanyeer Survey. Waa naqshadeeye sahan fudud oo kuu oggolaanaya inaad farsameyso oo aad ku daabacdo ra'yi dhiibashada internetka daqiiqado gudahood. Habkaas, waxaad u oggolaan kartaa kuwa raacsan inay go'aansadaan waxa muhiimka ah oo xitaa u adeegsadaan inay noqdaan isha dhiirrigelinta qoraallada mustaqbalka.
Daabacaadda maqaallada iyada oo aan tafatirin waligood fikrad fiican. Waa inaad hubisaa qoraal kasta oo yar si aad u hubiso inaysan jirin qaladaad higaada ama naxwaha. Si kastaba ha noqotee, tani waxay noqon kartaa hawl culus haddii aad rabto inaad gacanta ku qabato, markaa waxaan kuu soo jeedinaynaa inaad isticmaasho Grammarly. Qalabka wax lagu akhristo ee caanka ah ayaa ka eegi kara dhammaan qoraallada ilbidhiqsiyo gudahood isla markaana iftiimin kara khaladaadka, qoraalka isku murugsan, iyo faahfaahin kale oo badan oo ka dhigaya waxaaga kaamil ah.
9. Macdanta Ggrade
Haddii aadan rabin mashiin dib u akhrinaya qoraaladaada, waxaa jira xal kale oo fudud. Waxay ku timaaddaa qaab GgradeMiners, qoraal iyo hay'ad tafatir leh tobanaan tifaftirayaal xirfad leh. Kaliya waxaad ubaahantahay inaad siiso wicitaan waxayna si dhakhso leh kuugu meeleeyaan maareeye koonto oo la wareega kiiska. Adeegsiga adeeggan, kama filan kartid wax ka yar tafatirka dhammaystirka iyo qaab-ku-habboon.
Qalabka ugu dambeeya ee liiskayagu hubaal waa mid ka mid ah kuwa ugu xiisaha badan. Cliché Finder wuxuu ka caawiyaa qorayaasha inay sifeeyaan waxyaabaha ay ka kooban yihiin iyagoo aqoonsanaya oo iftiiminaya ereyada ama weedhaha aadka loo isticmaalay. Dadka badankood fiiro gaar ah uma laha dhibaatadan, laakiin waad layaabi doontaa inaad aragto inta ereyo eek u qoran qoraalka internetka. Qoraa culus, ma dooneysid inaad tan sidoo kale adiga kugu dhacdo, markaa isticmaal Cliché Finder si aad uga takhalusto khatarta.
Bloggers-yada ugu fiican kaliya ma ahan kuwa caqli iyo hal abuur leh laakiin sidoo kale waxay ku guuleystaan ​​adeegsiga barnaamijyada qorista khadka tooska ah iyo fiilooyinka. Tani waxay ka caawineysaa qorayaasha inay si dhakhso leh wax u qoraan isla markaana u abuuraan maqaallo usbuucba usbuuc ka fiican, taas oo ah shuruudaha aasaasiga ah ee noqoshada naqshadeeye heer-sare ah.
Waxaan ku tusnay liiska 10 aaladaha cajiibka ah ee qorista waxyaabaha kaa caawin kara inaad hagaajiso howlahaaga suuqgeynta. Hubso inaad iska hubiso oo aad qorto faallo haddii aad hayso talo soo jeedinno kale oo xiiso leh inaad nala wadaagto!
Daah-: Martech Zone waxay u adeegsaneysaa xiriiriyeheeda xiriirka Grammarly qodobkan.
Tags: mawduuca mawduuca blogqalafsanaantaku deg deg qormadaydaqalabka wax lagu qoro
5 Talooyin Wax-ku-oolin Is-beddelka Moobilka Wax-ku-oolka ah ee kugu guuleysta Macaamiisha